Java | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ngaba ndimele ndithenge i-javarush! Ngaba kunokwenzeka ukuba ube ngumqambi weJava kwi-javarush.ru inkonzo?
Ngaba kufuneka uthenge iJavarush! Ndingaba ngumdwelisi weJava enkosi kwinkonzo yejavush.ru? Kule mihla, ungafunda yonke into simahla. Ukuthenga imirhumo ngamampunge. Hayi, ukuba ufuna ikhowudi ngokwenene ...
Ingaba unayo ingxelo malunga neeGeekbrains? Ngaba niyamazi nabani na isikolo saseGeekbrains? Watshitshiswa, unomdla.
Ngaba lukhona uphononongo kwiiGeekbrains? Ngaba ukhona umntu oqhelene nesikolo seGeekbrains? Ndifikile, ndinomdla. Akude kube kudala ukuba ufunde. Ndithathe isigqibo sokuba ngumdwelisi weenkqubo ndineminyaka engama-30. Ngaphambi koko ndandisenza ...
Yiyiphi i-emulator engcono kakhulu kwi-pc?
Yeyiphi i-emulator kwi-pc ebhetele? Eyona ilungileyo yiGenimotion, kodwa ayikhululekile (inguqulelo yasimahla inezinto ezimbalwa) kwaye ifuna ukubhaliswa! Ndingabeka iBlueStacks yesibini! I-emulator ifuna ikhadi levidiyo elilungileyo, ...
Ngubani na abalilayo? Thumela imifanekiso uze uxelele ngabo baziyo.
NGOBANI OOMURANASI? Thumela imifanekiso uxelele ukuba ngubani owaziyo ngazo. ii-eel ezincinci. IMuranyas ngamantombazana asulelwe yintsholongwane ka "Kleito", eyenziwe ngumbutho "oPhezulu", ongulo nguNjingalwazi Radomsky kunye nomncedisi wakhe. ...
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,094.